Ungayisebenzisa kanjani isikrini esisha sokukhiya se-iOS 10 (II) | Ngivela kwa-mac
Siyaqhubeka sihlaziya futhi sithole ukuthi singasisebenzisa kanjani isikrini esisha sokukhiya sonke esivele sinaso kwi-iPhone ne-iPad yethu ngemuva kwe- ukufika okusemthethweni kwe-iOS 10.
Engxenyeni yokuqala yalokhu okuthunyelwe, sabona okuvamile nokuthi singafinyelela kanjani kukhamera nokuthi ungasiphatha kanjani isikrini sewijethi esisha. Manje sizoqeda le ndatshana ephindwe kabili ngokuhlaziya imininingwane esalindile.
1 Ukusebenzisana nezaziso esikrinini sokukhiya se-iOS 10
2 Ivula isikrini sokukhiya i-iOS 10
Ukusebenzisana nezaziso esikrinini sokukhiya se-iOS 10
Izaziso ezintsha ezifika nge-iOS 10 yilezi iyahambisana nomsebenzi we-3D Touch kwe-iPhone 6s ne iPhone 7. Ngenxa yalokhu kuhambisana okusha, abasebenzisi manje sebengasebenzisa izenzo ezisheshayo ukuze bagxumele ngqo kuzinhlelo zabo abazithandayo.
Njengoba ungacabanga, Izaziso zohlelo lokusebenza zinamazinga ahlukahlukene wokuxhumana, ngokuba yizinhlelo zokusebenza ze-Apple ezinawo, okwamanje, okusebenza kakhulu.
Izicelo zeMilayezo neMeyili, izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-Apple, ngokwesibonelo, zikuvumela ukuthi wenze okuhlukahlukene Izenzo ngqo kusuka kusikrini sokukhiyanjengokuphendula imiyalezo, kanti ezinye izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni zimane zikuqondise kuhlelo lokusebenza ngokwalo uma ifoni yakho isivuliwe. Lokhu kungenxa yokuthi kuseyizinsuku zokuqala, futhi onjiniyela kudingeka bengeze ukusekelwa okuthile kwezaziso ezintsha ze-iOS 10. Njengesici se-3D Touch, lezi zici kulindeleke ukuthi zikhule ekuthandeni njengoba onjiniyela abaningi bemukela i-iOS 10.
Njalo uma uthola isaziso esisha esikrinini sakho sokukhiya, cindezela bese ubamba umyalezo ukwenza kusebenze umsebenzi we-3D Touch.
Ibhokisi lengxoxo lizovela nezinketho ezikhona. Lokhu kuhamba kuyahluka kusuka kuhlelo lokusebenza kuya kuhlelo lokusebenza, kepha kungafaka, ngokwesibonelo, inketho yokufaka ibhidi yokugcina endalini ye-eBay, noma ukubuka okuthunyelwe komngani okuthandwa kamuva ku-Instagram, phakathi kokunye ukukhetha okuningi.
Uma uthatha isinqumo sokuqhubeka nebhokisi lengxoxo ye-3D-pop-up, uzodinga ukufaka iphasikhodi ye-iPhone yakho, noma ubeke umunwe kunkinobho yasekhaya ukuze usebenzise i-Touch ID.
I-iPhone izokuvula futhi ikuyise kuhlelo lokusebenza osebenzisana nalo esikrinini sokukhiya.
Uma ushintsha ingqondo yakho ngemuva kokusebenzisa i-3d Touch, thepha noma ikuphi esikrinini ukuze ubuyele ekubukeni okujwayelekile.
Qaphela: Izinhlelo zokusebenza ezingasekeli izaziso ezintsha zokukhiya isikrini zimane zingenayo imilayezo yokusebenzisana.
Ivula isikrini sokukhiya i-iOS 10
Lapho ekugcineni usukulungele ukungena kwi-iPhone yakho, landela lezi zinyathelo ezingezansi ukunqoba izithiyo zokuphepha ze-iOS 10.
Njenganoma yikuphi ukuxhumana kwesikrini ku-iOS 10, thatha i-iPhone yakho usebenzisa i-Elevate to Wake (i-iPhone 6s, i-6s Plus, i-SE, i-7 ne-7 Plus) ngokucindezela okusheshayo kwenkinobho yasekhaya noma inkinobho yasekhaya. Ukwenza kusebenze / Ukuphumula.
Beka ngokucophelela omunye weminwe yakho ebhalisiwe ye-Touch ID kunkinobho yasekhaya ukuze uvule i-iPhone yakho. Awudingi ukucindezela inkinobho futhi, uma uyicindezele ngaphambili ngokuya ngemodeli yakho ye-iPhone.
Manje uzobona ukwaziswa komshini ezansi kwesikrini.
Ukusuka lapha, usungadlulisa amehlo kuzaziso, bese ubona amawijethi adinga ukuthi i-iPhone ivulwe ngaphambi kokusetshenziswa (njengoMsebenzi).
Lapho usukulungele ukufaka i-iPhone yakho, vele ucindezele inkinobho yasekhaya.
Qaphela: Uma i-ID ye-Touch yehluleka ngemuva kwemizamo emithathu, ikhiphedi yezinombolo yendabuko izocela iphasikhodi ye-iPhone, ezovula i-iPhone yakho ngokushesha.
Kuyiqiniso ukuthi Isikrini esisha sokukhiya se-iOS 10 sithatha ukujwayela. Kepha noma kunjalo, uma uthola "iphuzu," kubonakala kulula kunokudala "Slayida ukuvula". Noma cha?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani isikrini esisha sokukhiya se-iOS 10 (II)
Ngisithandile isithombe ebenginaso encazelweni yesikrini sokukhiya lapho ungasithola khona ngemuva kokubonga kwe-iPhone